Scion - ဒီဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံသစ်လား။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28, 2006 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28, 2006 Douglas Karr
ဒါကြောင့်မင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိတယ်။ ကလေးတွေအရမ်းသဘောကျတယ်။ အရူးလို့ရောင်းတာပဲ သင်ဘာလုပ်ပါသလဲ? ထောက်ပံ့မှုကိုလျှော့ချပါ။ သို့မှသာသင်သည် ၀ ယ်လိုအားကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးသင်၏အမာခံကိုမရောပါစေနှင့်။ အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ရောင်းအားပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည်ရေတိုဖြစ်သည်။ ၀ ယ်လိုအားသည်နောက်ဆုံးတွင်သေသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လူတိုင်းတွင်တစ်ခုရှိသည်အထိယင်းကိုထုတ်ယူကြစို့၊ ထို့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုရောင်းကြစို့။ ထိုကဲ့သို့သောဤကဲ့သို့သောရေရှည်အစီအစဉ်သည်ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ အရသာ၊ ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာသူတို့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကိုအမေရိကန်အမှုဆောင်အရာရှိတွေကလက်ခံဖို့သဘောတူထားကြပါသလား။ ငါသူတို့လုပ်ရင်နောက်ထပ်သူတို့အလုပ်ရှာကြလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။
အပေါ်တွေ့ရှိခဲ့ Scion နှင့် Toyota ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်။ ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကြောင်း, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် VC တစ်ခု။ မှတ်ချက်များကိုကြိုဆိုပါတယ်။
PHP: Strrpos သုံးပြီးစာလုံးကိုဖြတ်ပြီးဖြတ်သွားပါ
29:2006 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 17
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ Scion xB ကိုနှစ်သက်ပြီး အရသာရှိသော Fritos ကို စားနေပါသည်။ မနာလိုတာလား?
နိုဝင်ဘာလ 29 ရက် 2006 ခုနှစ် ညနေ 2:09 နာရီ
မနာလိုတာလား? fritos မှ? ဟုတ်ကဲ့။ Scion? အမှတ် 🙂
နိုဝင်ဘာလ 29 ရက် 2006 ခုနှစ် ညနေ 10:31 နာရီ
Fritos က ကောင်းတယ်။ ဒါပဲ ငါပြောနိုင်တယ်။
30:2006 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 02
ကြက်ဟောင်းနှင့် ဥ၊ ဖမ်းအဟောင်း ၂၂။
US ထုတ်လုပ်သူများအတွက် နှေးကွေးသော်လည်း သေချာပါသည်။